Sebtember 2018 - RayHaber | raillynews
[18 / 01 / 2020] Nadiifinta geeska hoose ee Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha ee Izmir	35 Izmir
Abaalmarinta Darawalka Tareenka si looga Ilaaliyo Waqtiga Qalabka ah
Ururka Öz Taşıma-İş Union wuxuu abaalmariyay Hüseyin Aydın, xubin ka mid ah shaqaalaha ka shaqeysata wadatashiga wadooyinka ee Ankara Subway kana hortagay musiibo ayagoo ku bakhtiiyay dabkii gaariga. Ankara Subway [More ...]
Geedaha laga saaray Khadka Gawaarida ee Badbaadinta
Dawlada Hoose ee Magaalada Eskişehir waxay sameysay bayaan ku saabsan geedaha ay ahayd in laga baxo inta lagu gudajiro howlaha cusub ee taraamyada. Bayaanka, waxaa mahad leh qalab gaar ah oo laga soo qaatay xididdada dhammaan geedaha ku yaal jardiinooyinka iyo jardiinooyinka lagu koriyo [More ...]
Gaadiidka Gaziantep wuxuu bixiyay Kala duwanaansho
Dowlada Hoose ee Gaziantep ayaa hadafkeeda ah inay yareyso ciriiriga taraafikada iyo qiiqa kaarboonka iyadoo dadka lagu dhiirigelinayo inay adeegsadaan habab gaadiid oo waara sida socodka, gaadiidka dadweynaha iyo baaskiil wadista. Magaalada gudaheeda oo leh baaxadda qorshaha diyaarinta gaaska [More ...]
Maanta taariikhda: 30 September 1931 Samsun-Sivas line
Alipinar Bridge Cusbooneysiinta
Degmooyinka Magaalooyinka Diyarbakir, Yenişehir iyo Bağlar ee isku xiraya tareenka isku xiraya Buundada Alipınar Bridge ayaa waxaa ka socda dayactir iyo dayactir. Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalada, Alipınar oo isku xirta Degmooyinka Yenişehir iyo Bağlar [More ...]
Saacadaha Badbaadada Gawaarida Isbeddelka ku Dhexeeya Antalya
Basaska badda ee 1, oo sii wata duulimaadyadooda inta u dhaxaysa Antalya Kaleiçi Marina iyo Kemer Marina, ayaa isbeddelaya canshuuraha illaa Oktoobar. Basaska Badda oo samayn doona laba duulimaad oo midba midka kale maalin walba sameeya inta lagu jiro Oktoobar, [More ...]
Waxay ku dhammaadeen Konya, Gnar
Dowlada hoose ee Konya, Meram waxay noqon doontaa wadada ugu weyn ee Gaza Street dhamaad. Baaxadda hawlaheeda dhexdooda, lakabka xayndaabka xarkaha ayaa dhammaaday oo loo furay gaadiidku. Waxaa la bartilmaameedsaday in la dhammeeyo dhamaadka sanadka, Meram Yeni [More ...]
Buundada Baaskiilka ah ee 42 Guryaha
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay dhistay buundo cusub oo casri ah oo lugeyneysa oo ku taal aagga 100 Evler ee D-42 Highway. Burburkii biriijkii hore ee dadka lugeynayay ee ku xiga buundada ayaa sii socda. Bandhigga buundadii hore [More ...]